सयन्द्रको सपना साकार : हलेसीमा किरात संग्रहालय – Tesro Ankha
हलेसी किरात, बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल मानिन्छ । हलेसी आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सालिन्दा बढ्दै गएका छन् । यहाँ आइपुगेकालाई पद्मसम्भवले यहाँ दिव्य १२ वर्ष तपस्या गरेको कथा सुनाइन्छ । गुम्बा घुमाइन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीले हलेसीमा रहेको गुफालाई हिन्दुकरण गरी सुनाउने गरिन्छ । तर, किरातले के सुनाउने, के देखाउने ?
हलेसी–६ कात्तिकेका सयन्द्र राईलाई पहिलेदेखि यही कुरा खड्किरहेको थियो । यसबारे कसैले केही योजना बनाएनन् । सुनाएनन् । अनि राई आफैँ लागे हलेसीमा किरात संग्रहालय बनाउने अभियानमा ।
अभियानले मूर्त रूप लिँदै गएको छ । यसलाई मूर्त रूप दिन हलेसी प्रतिष्ठानसम्बद्ध सदस्यले उनको परिकल्पनालाई अभियानका रूपमा अघि बढाएका छन् । प्रतिष्ठानसम्बद्ध सदस्य हलेसी पुगेर महादेवस्थान गाउँ विकास समितिअन्तर्गत प्रत्येक वडाको प्रत्येक घरधुरी पुगेर किरात राई जातिले प्रयोग गर्ने पुराना सामग्री संकलन गरेको छ । सयन्द्रले सुनाए, ‘महादेवस्थान गाविसका राई जातिले प्रयोग गर्ने ऐतिहासिक सामग्रीसमेत भेला पारेका छौँ । गाविसमा रहेकामध्ये ६० प्रतिशत सामग्री जम्मा गर्न सफल भयौँ ।’
६० प्रतिशत सामग्रीमा के–के परे होलान् ? उनले थपे, ‘पुरानो तरवार, भाला, तान बुन्ने सामग्रीको सेट । उहिलेका तामाको फोसी, माना, पाथी, पुरानो डाडु, खरिपाटी, घडीलौरो (उहिले घडी नहुँदा समय मापन गर्ने साधन) लगायत सामग्री रहेका छन् ।’ संग्रहालयमा राख्ने सामग्री त जम्मा भयो तर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने भवन चाहिएको छ । भवन तयार नभइन्जेलका लागि हलेसी गाविसको गाविस कार्यालयको एउटा कोठामा सीमित छ । कोठामै सीमित भएकाले हलेसी आइपुगेका पर्यटकलाई संकलित ऐतिहासिक सामग्री देखाउन सकिएको छैन ।
त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हलेसी प्रतिष्ठान लागिपरेको छ । संग्रहालय भवन बनाउन आर्थिक संकलन गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । प्रतिष्ठानको अभियान पूरा गर्न हलेसी प्रतिष्ठानको मात्रै अभिभारा होइन । तपाईं सबै मनकारीले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ । संग्रहालय भवन बनाउन तपाईंले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सयन्द्र राईलाई ९८४१९४९०८७ मा सिधा सम्पर्क गरेर सघाउन सकिन्छ ।
भनिन्छ– काठमाडौँमा सबैथोक छ । हुन पनि हो । होइन भन्ने सायदै होलान् ? नत्र ७५ जिल्लाकै मानिस काठमाडौँमा किन जम्मा हुन्थे । खोटाङको हलेसीबाट सयन्द्र राईहरू काठमाडौँ आउँदैनथे होलान् । काठमाडौँमा मोफसलबाट आएका सयन्द्र राईहरूको ‘क्याराभान’ देखिन्छ ।
काठमाडौँमा सबैथोक भए पनि आफ्नो सालनाल गाडिएको ठाउँ नै सबैलाई प्यारो लाग्दोरहेछ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेका छन्– सयन्द्र राई । उच्चशिक्षा हासिल गर्ने एक झोला सपना लिएर काठमाडौँ टेकेका राईको सपना फुल्दै गएको छ । व्यक्तिगत सपना फुलाउनुमा मात्रै उनले अर्थ देखेनन् । त्यही भएर हलेसीमा किरात संग्राहलय खोल्ने अठोट लिए । अठोटलाई मूर्त रूप दिन उनी लागिपरेका छन् ।
दुई छाक खान उनी नयाँ पत्रिका दैनिक हाजिर हुन पुग्छन् । उनी हाइटेक एजुकेसनल इन्स्टिच्युट बौद्धका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । कसैले लौन एउटा पत्रिका सेटिङ गरिदिनुप¥यो भन्दै अनुरोध गरेपछि उनलाई नाइँ भन्न आउँदैन । उनले सारा दौडधुप भ्याएर हलेसीमा किरात संग्रहालय बनाइछाड्ने सपना देखेका छन् । हलेसी प्रतिष्ठानको कोषाध्यक्षसमेत रहेका उनको सपना पूरा गर्न हलेसी प्रतिष्ठान अध्यक्ष तारा राई, सुविन्द गिरीहरू लागिपरेका छन् । राम्रो काम गर्नेलाई सहयोग नगर्ने को होलान् ?
हलेसीमा किरात संग्रहालय बनाउने भनेपछि हलेसीका स्थानीयले आफूसँग रहेका पुराना सामग्री उपलब्ध गराउनेले यत्तिमात्रै भने, ‘हामीले हाम्रा पूर्वजले प्रयोगमा ल्याएका सामग्री जसरी सुरक्षित राखेका थियौँ, त्यस्तै सुरक्षित हुनुपर्छ बन्न लागेको संग्रहालयमा । किनकि यो सामान हाम्रा पूर्वजको नासो हो ।’ संकलित सामग्री करोडौँमा पनि किन्न पाइँदैन । अहिले हलेसीमा लाग्ने मेलाविशेष र किरात राईको महान् चाड वैशाखे पूर्णिमा (उँभौली) र मंसिरे पूर्णिमा (उँधौली) मा मात्र खुला गरिने भएको छ ।
२०७३ माघ ७ ०१:५८